UPF50 + Akanjo fandroana zaza an-jaza tsy mety ririnina mety ho an'ny beach |
UPF50 + Akanjo fandroana zaza an-taonan'ny zaza tsy ampy taona mety ho an'ny beach
Anaran'ny vokatra: Zazakely zazakely zazakely milomano beachwear akanjo bazazin'ankizy
endri-javatra: Fiarovana tsy misy poizina, UV
Fanontana sy marika: Fanontana lamba vita amin'ny landy, fanontana hafanana, Costomized
UV sun Protective Rashguard: UPF50 +
Swimsuits ho an'ny zazavavy, kofehy azo ovaina, lamba vita amin'ny elastika avo lenta, malefaka ary mora amin'ny hoditra ho an'ny zaza mitombo
Ny pirinty mamirapiratra sy ny safidy loko mahafinaritra dia manome antoka fa miavaka izy io na ivelan'ny rano
Fiarovana masoandro UPF 50+, arovy ny hoditry ny zazavavinao amin'ny toetrandro mafana
Mety amin'ny filomanosana, amoron-dranomasina, pisinina, fandroana na fialantsasatra amin'ny fahavaratra
Akanjo fandroana zazavavy amin'ny taona 2-12 taona. Safidy tsara indrindra ho an'ny lesona milomano na fialamboly amin'ny rano amoron-dranomasina
Miaraka amin'ny fikolokoloana tsy misy farany ny fiarovana sy ny fahalianan'ny vokatra ho an'ny mpanjifa, dia tsy mitsaha-mitombo ny fanavaozana ny akanjo mafana mafana indrindra amin'ny fanamboarana tsara indrindra azo atao.
Size Age (taona) Haavo (cm) Milanja (0,5 kg)
4XL 10-12 140 60-65 tany ho any
Novakiako ny hevitra hafa sy ny habeny. Faly aho fa nanao. Ny zanako vavy dia mitafy 4T mafy orina ary mifanaraka tsara amin'ny efitrano kely itomboany izany. Mahafatifaty modely ary tiako ny fehin-kibo azo ovaina.
Tsy nanantena firy an'ity akanjo fandroana ity aho satria mora vidy nefa diso be aho! Mifanaraka tsara izany ary kalitao tsara lavitra noho izay nandrasako. Faly aho fa nanandrana an'ity fitoriana ity!
Previous: Bikini tanora roa sombin-dehilahy mametraka akanjo milomano manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 12 taona
Manaraka: Miloko marevaka mahafatifaty mavomavo sombin-tsakafo iray zazavavy milomano
Fivarotana fitafiana ho an'ny ankizy
Swimsuit Ho an'ny Ankizy
Mavo marevaka mahafatifaty sombin-jazavavy Swi ...
Fahavaratra 90-120cm Reversia-mora miaina reversi ...